China saxsanaan sare oo sareeysa 14 weji weji wejiga wershadaha xashiishka shaaha iyo soosaarayaasha | Smart Miisaan
Xaqiiqo yar oo sax ah 14 madax miisaan culus oo wejiga cannabis ah
Miisaan yar oo 14 miisaan ah oo leh cabbir 0.5L ah, ayaa leh saxsanaan ka sareysa tan 14 madaxa caadiga ah. Waxay awood u leedahay inay miisaamto shaaha, abuurka iyo xashiishka.
Volume Volume: 0.5L
120 kiish / min
7 ”shaashad taabasho
Qiyaasta madaxa ee 'Mini 14' ayaa ku habboon shaah, miraha, jiilaalka iyo wixii la mid ah Alaabada noocan ah waxay dalbadaan saxnaan aad u sarreysa si ay u ilaashadaan qiimaha.
• 0.5L xitaa 0.3L rooti wax soo saar yar.
• Nidaam xakameyn guddi moodeelka leh oo leh shaashad taabasho ah.
• Qaabka pan oo quudinta toosan oo kala duwan oo loogu talagalay alaabada kala duwan.
• Kaamiro ikhtiyaari ah oo saaran miisaanka dusha sare si loola socdo waxqabadka miisaanka culus.
Smart Weigh wuxuu bixiyaa muuqaal 3D u gaar ah (aragtida 4-aad sida tan hoose). Waad ka hubin kartaa mashiinka hore, dhinac, dusha iyo aragtida oo dhan cabirka. Way iska cadahay inaad garato cabirka mashiinka oo aad go’aansato sida loo dhigo weweherka wershadahaaga.
Hore: Mashiinka wax lagu xaraysto ee gawaarida qashinka lagu rito
14 culeys madax ah
xawaare sare miisaan